कसरी हुन्छ लैंगिक हिंसा अन्त्य ? |
कसरी हुन्छ लैंगिक हिंसा अन्त्य ?
प्रकाशित मिति :2016-12-01 13:23:36
लैंगिक हिंसा अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज यत्रतत्र सुनिन्छ । तर यसका लागि के गर्नु आवश्यक छ यसको जवाफ हरेकसँग फरक फरक छ । कपिलवस्तु सहकर्मी पार्वती पाण्डेले अधिकारकर्मीसँग महिला खवर डटकमका लागि गर्नुभएको कुराकानीको अंश ।
पुरुषवादी चिन्तनको अन्त्य हुनुपर्छ : रामदयाल ठाकुर, अधिकारकर्मी
पुरुषवादी चिन्तनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । मधेशी महिला झनै हिंसामा पर्ने गरेका छन् । महिलालाई हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने सचेतिकरणको आवश्यकता पुरुषलाई पनि धेरै छ । महिला र पुरुष दुवैलाई राखी यस प्रकारका कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ । अर्को तर्फ छोरा र छोरीलाई समान शिक्षा दिनुपर्छ । शिक्षामा विभेद गरिनु हुँदैन । समान शिक्षाले लैंगिक हिंसा न्युनिकरण गर्छ ।
महिलालाई शिक्षामा सहुलियत हुनुपर्छ : नन्दराम पौडेल, मानवअधिकारकर्मी
अधिकांस महिला वेरोजगार भएका कारण पनि हिंसा पर्ने गरेका छन् । सरकारले वेरोजगारको अन्त्य गरि रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ । महिलालाई शिक्षा आर्जनमा विशेष सहुलियत दिई सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ । अर्को महत्वपुर्ण कुरा बनेका कानुन समय सापेक्ष परिमार्जन गरि कार्यान्वयनका लागि दवाव सृजना गर्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन नहुँदा पनि महिला चरम हिंसा खेप्न वाध्य छन ।
सुर्य कुमारी शाही
घरबाटै सुरु गरौं : सुर्य कुमारी शाही, अधिकारकर्मी
लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सवै एकजुट हुुनुपर्छ । परिवर्तन आफैबाट शुरु गर्नुपर्छ । घर परिवारबाटै परिवर्तनको शुरुवातले समाजमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । साथै सरकारी निकाय , गैरसरकारी संघ संस्था सवै मिलेर काम गर्नुपर्छ । सचेतना कार्यक्रम वर्षैभरि नै गर्नु आवश्यक छ । अधिकारका कुराहरू गाउँतहसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।
सहेर नबसौं : चेतना अधिकारी, महिला अधिकारकर्मी
महिला आफै पनि हिंसा सहेर बस्नु हुँदैन । यसले गर्दा पिडा दिने मान्छेको मनोवल वढ्छ । पुनः घट्ना दोहोरी रहन्छन् । त्यसैले पनि महिलाले पिडालाई लुकाउनु हुँदैन । आफू अन्यायमा परेको कुरा सम्बन्धित निकायमा बताउनुपर्छ । अर्को तर्फ महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र चिन्तनमा समेत परिवर्त हुनु पर्छ । महिलाले गरेको योगदानलाई पनि उच्च कदर गर्नु आवश्यक छ ।
पहुँच बढाउनुपर्छ : मिना परियार, अधिकारकर्मी
सत्ता र शक्तिमा महिलाको पहुँच हुनुपर्छ । जवसम्म यी दुवै कुरामा महिलाको पहुँच हुन सक्दैन तवसम्म हिंसा भई नै रहन्छ । अर्को तर्फ बनेका नीतिनियम पनि कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । महिलामाथि हिंसा गर्ने जोकोहीलाई कडा कारवाही हुनुपर्छ । सरकारी निकाय पनि महिलामैत्री बन्नु पर्छ । सरकारी निकायमा वजेट महिलामैत्री नबन्दा पनि लैंगिक हिंसा बढी मात्रामा भएको पाइन्छ ।
हिंसा गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक रबिन्द्रनाथ ठाकुर : अधिकारकर्मी
विगतमा दबिएका हिंसा वाहिर आउन थालेका छन् । गाउँघरमा जनचेतनाका अभियान अझै तिव्र पारिनुपर्छ । कोही कसैले पनि कसैमाथि हिंसा गर्नुहुन्न भन्ने सन्देशमुलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानलाई वर्षैभरि लैजानु पर्छ ।